Iimveliso - iYantai Ishikawa yokuTywina iTekhnoloji Co., Ltd.
Sinceda umhlaba okhulayo ukusukela ngo-1991
Inkxaso yeminxeba 0086-15763807215 0086-535 6856565
Inkxaso ye-imeyile xsb@ytsc.cn 805870329@qq.com
Irabha Camera Material Material
Uthotho lweQela lamaQela
Uthotho lweQF Hi-Q
I-FBYS yeendleko ezisebenzayo
I-R & D
Isisombululo esihle ngexabiso elifanelekileyo.
QF3725 Iphepha lokutywina i-asbestos
QF3712 Iphepha lokutywina elingu-asbestos
QF3707 Iphepha lokutywinwa kwe-asbestos
I-FBYS408 Iphepha lokutywinwa kwe-asbestos
Iimveliso zethu zisetyenziselwa i-injini yesilinda gasket kunye ne-gasket yokufikelela, enamathela ngerabha ephezulu. Ilungele ubushushu obuphezulu kunye neoyile, ukumelana ngokuphakathi ne-antifreeze, isipholisi kunye nolunye ulwelo.
Uhlobo oluphambili: UFM2520, UFM3020, UFM3025 / UNM2520, UNM3020, UNM3025 / SNM3020, SNM 3825
Iimveliso zethu anti-ingxolo ukuba bodwa kunye nemisebenzi damping, nto leyo ukumelana lobushushu eliphezulu ixesha elide kunye nokusebenza yokunciphisa ingxolo kwinkqubo braking. Ngokudityaniswa ezahlukeneyo PSA, oko ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo lobushushu eliphezulu okanye eliphantsi.
Uhlobo oluphambili: SNX5240, SNX5240J2, SNX5240J3, SNX5240J4, SNX6440, SNX6440W, SNX6440J2, SNX6440J3, SNX6440J4, SNX6040, SNX4640, SNX4640-J
Uthotho lweziqwengana zemixholo
Iziqeshana zokuhamba kunye nokubambelela zibalulekile ekusebenzeni kakuhle kwenkqubo yokuqhekeza. Iimveliso zethu zinokuyicinezela ngokufanelekileyo ingxolo yokutyibilika; phucula intsebenzo yokunciphisa ingxolo iyonke yenkqubo yokuqhawuka. Inokudala ukubonelela ngedrive ekhululekile kunye noxolo.
Uhlobo oluphambili: UNX3025-1, UNX4035-1, UNX5045-1, UNX6055-1, UNX3025-F, UNX4035-F, UNX5045-F, UNX6055-F, UNX5040-FF
Uthotho lwefibodi ye-non-asbestos
Inkampani ifunxa ifilosofi yoyilo oluphambili yamanye amazwe kunye nobuchule bokuqhubekeka kwaye yenza izinto ezintsha.
Kuya kwenzeka ntoni ukuba i-cylinder yentloko ...
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele xa ufaka ...
Kufuneka wenze ntoni xa kukho ingxaki nge ...
Imicimbi eliqela efuna ingqwalaselo kwi ...
Ukusebenza emva isilinda intloko gasket fa ...